ရွာကားအဆိုဒါရိုက်တာမိုက်တီးပေါက်ကွဲ – PAPAWADY
Posted on March 16, 2018 by papawady
အကယ်ဒမီဆုရှင်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ရဲ့ ရွာကား အဆိုကို ပေါက်ကွဲတဲ့သူနောက်တယောက်ကတော့ နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာ မိုက်တီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာမိုက်တီး (ဖေ့ဘွတ်ခ်)အကောင့်နာမည် သန်းထွန်းဇော် က ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ကို တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အကယ်ဒမီ ဆွေဇင်ထိုက်က ရွာသားတွေရိုက်ရင်တော့ ရွာလက်ရာပဲထွက်မှာပေါ့ ဆိုတာကို ရုပ်ရှင်လောကသတွေဟာ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးတဲ့သူတွေကတော့ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ဘာပြောသလဲဆိုတာသိကြမှာပါ။ ဒါရိုက်တာမိုက်တီးရေးထားတာကဒီလိုပါ။ရွာသား – မြို့ သားမြို့ကျောင်းထွ က် – ဗို လ်ကျောင်းထွ က်(ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်)သေချာတာကတော့ -မြန်မာရုပ်ရှင်ကို နှစ်ခြမ်း ခြမ်းလိုက်တာပဲ ။အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တလှေထဲစီး တခရီးထဲသွားချင်း ညီရင်းအကို မောင်နှမများနှယ် လဲနေသူကို ထူ – လိုနေသူကို ကူ လို့ မျှ ဝေ ကူ ထောက် ရင်း လိုရာပန်းတိုင် အရောက်- တညီတညွတ်ထဲ လျှောက်ကြရမဲ့ အနုပညာ မောင်နှမတွေကို ဘာဖြစ်လို့သွေးခွဲနေရတာလဲ !ကောင်းသူ – ဆိုးသူ – တော်သူ – ညံ့သူ – ဘာလို့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပစ်ရတာလဲ ! ဘာလို့ဖြိုခွဲနေကြတာလဲ !ဘာ အ တွ က် လဲ !အဇ္ဇျတ္တ အထိ ကြည့်စေချင်ပါတယ် ။ အနုပညာရှင်ဆိုတာ တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအင်အားပဲ လို့နိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။ဒါရိုက်တာမိုက်တီး ရဲ့စတေးတပ်ကို သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်သူဇာ နဲ့ ခန့်စည်သူတို့ကလည်း ထောက်ခံစွာနဲ့ LIKE ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ရဲ့ စကားကို ထောက်ခံမှု အများအပြားရှိနေပြီး ပပ၀တီ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ ရဲ့ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် အဆို ထောက်ခံပါသလားဆိုတဲ့ Voting မှာ ဗုတ်တဲ့ဦးရေ လူဦးရေ ၃ ထောင်ကျော် က ထောက်ခံထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မုဒြာခေါ်သံရုပ်ရှင် အား ပရိသတ်များအားပေးမှုအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေပြီး လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာ ရိုက်ကူးနေတဲ့ မြန်မာပေါကားတွေကိုလည်း ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာတာတွေ့ရမှာပါ။
အကယျဒမီဆုရှငျဝါရငျ့သရုပျဆောငျ ဒျေါဆှဇေငျထိုကျ ရဲ့ ရှာကား အဆိုကို ပေါကျကှဲတဲ့သူနောကျတယောကျကတော့ နာမညျကွီး ဒါရိုကျတာ မိုကျတီး ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါရိုကျတာမိုကျတီး (ဖဘှေ့တျချ)အကောငျ့နာမညျ သနျးထှနျးဇျော က ဖဘှေ့တျချမှာ ဒျေါဆှဇေငျထိုကျ ကို တုနျ့ပွနျပွောဆိုလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ အကယျဒမီ ဆှဇေငျထိုကျက ရှာသားတှရေိုကျရငျတော့ ရှာလကျရာပဲထှကျမှာပေါ့ ဆိုတာကို ရုပျရှငျလောကသတှဟော ဆတျဆတျထိမခံဖွဈနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဖတျပွီးတဲ့သူတှကေတော့ ဒျေါဆှဇေငျထိုကျ ဘာပွောသလဲဆိုတာသိကွမှာပါ။
ဒါရိုကျတာမိုကျတီးရေးထားတာကဒီလိုပါ။ရှာသား – မွို့ သားမွို့ကြောငျးထှ ကျ – ဗို လျကြောငျးထှ ကျ(ဒျေါဆှဇေငျထိုကျ)သခြောတာကတော့ -မွနျမာရုပျရှငျကို နှဈခွမျး ခွမျးလိုကျတာပဲ ။အားလုံးဟာ မွနျမာနိုငျငံသား မွနျမာလူမြိုးမြားရဲ့ မွနျမာရုပျရှငျသာ ဖွဈပါတယျ ။ တလှထေဲစီး တခရီးထဲသှားခငျြး ညီရငျးအကို မောငျနှမမြားနှယျ လဲနသေူကို ထူ – လိုနသေူကို ကူ လို့ မြှ ဝေ ကူ ထောကျ ရငျး လိုရာပနျးတိုငျ အရောကျ- တညီတညှတျထဲ လြှောကျကွရမဲ့ အနုပညာ မောငျနှမတှကေို ဘာဖွဈလို့သှေးခှဲနရေတာလဲ !ကောငျးသူ – ဆိုးသူ – တျောသူ – ညံ့သူ – ဘာလို့နှဈပိုငျးပိုငျးပဈရတာလဲ ! ဘာလို့ဖွိုခှဲနကွေတာလဲ !ဘာ အ တှ ကျ လဲ !အဇ်ဇတ်ြတ အထိ ကွညျ့စခေငျြပါတယျ ။ အနုပညာရှငျဆိုတာ တိုငျးပွညျတပွညျရဲ့အကွီးမားဆုံးအငျအားပဲ လို့နိဂုံးခြုပျထားပါတယျ
ဒါရိုကျတာမိုကျတီး ရဲ့စတေးတပျကို သရုပျဆောငျ စိုးမွတျသူဇာ နဲ့ခနျ့စညျသူတို့ကလညျး ထောကျခံစှာနဲ့LIKE ထားတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ပရိသတျတှကေတော့ ဒျေါဆှဇေငျထိုကျ ရဲ့ စကားကို ထောကျခံမှု အမြားအပွားရှိနပွေီး ပပဝတီ ဖဘှေ့တျစာမကျြနှာ ရဲ့ ဒျေါဆှဇေငျထိုကျ အဆို ထောကျခံပါသလားဆိုတဲ့ Voting မှာ ဗုတျတဲ့ဦးရအေယောကျ ၃ ထောငျကြျော က ထောကျခံထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ မုဒွာချေါသံရုပျရှငျ အား ပရိသတျမြားအားပေးမှုအရှိနျအဟုနျမွငျ့တကျနပွေီး လကျရှိဈေးကှကျအတှငျးမှာ ရိုကျကူးနတေဲ့ မွနျမာပေါကားတှကေိုလညျး ဝဖေနျမှုတှမွေငျ့တကျလာတာတှရေ့မှာပါ
Posted in သတင်းTagged ဒါရိုက်တာမိုက်တီး
Celebrity of the Week- အေးမြတ်သူ ရဲ့ ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များ